Ubuhle - China Tianyi Group
1. Breakage isixhobo vulu sokufunxa: Xa breakage vulu, vulu esikrazukileyo lula ungasondeli ngaphandle, kuya kunceda ekuphuculeni ukusebenza yomsebenzisi. 2. Indlela wonke oluzenzekelayo doffing HQF2011 doffing oluzenzekelayo neemvakalelo Umatshini isebenzisa oluzenzekelayo doffing yonke indlela yokuphuma, doffing inkqubo enobuchule, ngok nefanelekileyo, kulula ukuba ukusebenza, kwaye lula imibuzo. 3. isivamvo yokusebenza High kunye elilelona kwemicimbi ukuqina test yolawulo microcomputer isivamvo yokusebenza High indawo ehanjiswayo nge 0.1mm ekuchanekeni, ...
1. Breakage isixhobo vulu sokufunxa:
2. Indlela wonke oluzenzekelayo doffing
3. isivamvo yokusebenza High kunye elilelona kwemicimbi ukuqina ulawulo microcomputer
isivamvo yokusebenza High uvavanyo indawo ehanjiswayo nge 0.1mm ukuchana, microcomputer khumbula imeko kwempixano, ukuba lithathelwe iimeko ezahlukeneyo kukujikeleza (isantya iflaya, inombolo umthamo), oko kungaba ukhethe ngokuzenzekelayo ukugogeka karhulumente ezikumgangatho ophakamileyo, akuyomfuneko ukuba ngesandla olumiselwe xa karhulumente uxinzeleko.
4. Flyer kunye nesondo isebenzisa nebhanti isikhathi
Iflaya nesondo nentshukumo ejikelezayo ioli bath gearbox, ixesha imo drive ibhanti iimfuno kukujikeleza-ngesantya esiphezulu, oko anazo kahle eliphezulu zothumelo. Ukuqinisekisa ibhanti ujikelezo tyaba, i-unique isakhiwo ibhanti tensioner kunye ukuguga ngaphantsi nengxolo ephantsi.
Previous: FB471 uboya isakhelo ojikeleza sendoda
Next: JW81 jet amanzi yomluki
Oluzenzekelayo Doffing awayeyabula Machine
Wool awayeyabula Machine